Knowledge – ပဒသော
ဘုရားစေတီတော်ပုံကို မြင်လျှင် မျှဝေလိုက်ပါ တစ်ပတ်အတွင်း ငွေတွေ သိန်းသောင်းနဲ့ချီ ဝင်လာလိမ့်မယ်..
ရသစုံ | August 13, 2020
မြင်လျှင် မျှဝေလိုက်ပါ သင်တစ်ပတ်အတွင်း ငွေတွေ သိန်းသောင်းနဲ့ချီ ဝင်လားလိမ့်မယ်ကံထူးလာပါလိမ့်မည် ကံ ကံ၏ အကျိုးရရှိမည်စီးပွားရေးတွေ ဒီရေအလားတိုးတက်ပြီး လိုအင်ဆန္ဒဟူသမျှ ပြည့်စုံမည်။မနက်မျက်နှာလေးသစ်ရင် သရဏဂုံအမြဲရွတ်ပါမျက်နှာအကြည်ဓာတ်လေးရစေပါတယ် သွားတိုက်ရင် ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားပါ ကိုယ်ရဲ့ကောင်းတဲ့အကြံအစည်အပြောအဆိုတိုင်း သူတပါးအား အောင်စေပါတယ် သတိရရင်ရသလို မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပါ မေတ္တာပေးတဲ့သူနား မေတ္တာပြန်ပေးသူတွေနဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးစေပါတယ် တနေ့ ၂ ကြိမ် အနည်းဆုံး သောက်တော်ရေချမ်းကပ်လှူပါ
ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံအကူညီသွားတောင်းမိတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့အဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ခင်ပွန်းသည် ဖောက်ပြန်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။စိတ်ထိခိုက်ပြီး သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့တာကြောင့်တောင်တစ်လုံးပေါ်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ပညာရှိဘုန်းတော်ကြီးထံကနေ အကြံဉာဏ်ရယူဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခရီး၊ တောင်တက်ခရီးတွေအပါအဝင် ရက်အနည်းငယ်သွားပြီးတဲ့နောက် တောင်ထိပ်မှာသီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးထံ ရောက်သွားပါတယ်။တပည့်တော်မရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ သူ့အတွက်ပဲ အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နုပျိူမှုတွေကိုရင်းပြီးသူ့အနားမှာပဲ နေခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဂရုစိုက်ပြီးလည်း ပြု စုခဲ့တယ်။ခုတော့ သူက
ဖူးရခဲတဲ့ ခရုခွံစေတီ လိုင်းဖွင့်ချိန်နဲ့ဆုံခဲ့ရင် လိုရာဆုတောင်းပီြး ပန်လည်မျှဝေလိုက်ပါ🙏🙏🙏
ဖူးရခဲတဲ့ ခရုခွံစေတီ လိုင်းဖွင့်ချိန်နဲ့ဆုံခဲ့ရင် လိုရာဆုတောင်းပီြး ပန်လည်မျှဝေလိုက်ပါ🙏🙏🙏 မယုံမရှိနဲ့နော် လိုရာဆုကိုတောင်းလိုက်ပါ တစ်ပတ်အတွင်းငွေဝင်ပါလိမ့်မယ်… မိသားစုအဆင်မပြေမှုတွေလည်းမရှိရအောင် အိမ်အညံ့တွေလဲမဖြစ်ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါနော်… ၂၀၂၀နှစ်ထဲမှာ သင့်ထံကံကောင်းခြင်းတွေဝင်လာမှာပါ..၀င်လာမဆဲတသဲသဲဆိုသလိုပေါ့ဗျာ.. Unicode ဖူးရခဲတဲ့ ခရုခှံစတေီ လိုငျးဖှငျ့ခြိနျနဲ့ဆုံခဲ့ရငျ လိုရာဆုတောငျးပီွး ပနျလညျမြှဝလေိုကျပါ🙏🙏🙏 မယုံမရှိနဲ့နျော လိုရာဆုကိုတောငျးလိုကျပါ တဈပတျအတှငျးငှဝေငျပါလိမျ့မယျ… မိသားစုအဆငျမပွမှေုတှလေညျးမရှိရအောငျ အိမျအညံ့တှလေဲမဖွဈရအောငျ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါနျော… ၂၀၂၀နှဈထဲမှာ သငျ့ထံကံကောငျးခွငျးတှဝေငျလာမှာပါ..ဝငျလာမဆဲတသဲသဲဆိုသလိုပေါ့ဗြာ..
ဘေဘီလေးကို ဒူးရင်းသီး ကျွေးလို့ရလား?????
ဘေဘီလေးကို ဒူးရင်းသီး ကျွေးလို့ရလား ကလေးက အစားစစား တတ်ပြီ။ ဒါဆို အသီးတွေလည်း ကျွေးလို့ ရပြီပေါ့။ ဒါဆိုရင် တော်တော်များများ ကြိုက်ကြတဲ့ ဒူးရင်းသီးရော ကလေးကို ကျွေးလို့ ပြီလား၊ လို့ မေးစရာ ရှိနိုင် ပါတယ်။ ဒီအဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါ တယ်။ ကလေးကို ဒူးရင်းသီး
မယုံနိုင်ဖွယ် အလောင်းတော်ကဿပလိုဏ်ဂူထဲ ၀င်နိုင်ခဲ့သူအကြောင်း….
ကျော်အောင်စံထား ဆရာတော်၏ အလောင်းတော် ကဿပ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှ ဖတ်၍အဆင်ပြေရန် အတိုချုံး၍ ပြန်လည်ကူးယူ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ အမရပူရမြို့ သတ္တမမြောက်​ကျော်အောင်စံထား ဆရာတော်အရှင်ဝါယမာဘိဝံသ သည် ၁၃၁၆ ခု တပို့တွဲလဆန်း ၁ ရက်နေ့တွင် အလောင်းတော် ကဿသ ဖလှိုဏ်ဂူရှိရာသို့ စတင်ခရီးထွက်လာ၏။ ကပိုင်မှတဆင့် တောကြီးအတွင်းသို့ခြေလျှင် ကြွခဲ့၏။ ချောင်းမကြီးကို ဖြတ်ကျော်ပြီးလူသွားလမ်းလေး အတိုင်းလာခဲ့ရာ
ထီထိုးထားသူတြေအတြက် ထီပေါက်စေမယ့္ထီပေါက္ဂါထာတ္ကောိုမ်ွဝေလိုက္ပါတယ်…ယုံကြည္စြာရတ္ဆြိုပြီးကံထူးကြပါစေနာ်..ထီပေါက္ဂါထာတော်…“ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခေ၀ မမသာဝကာနံ၊ ဘိက္ခူနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏွန္တာနံ။ ယဒိဒံ ကုဏ္ဍဓါနော၊ ဧတေနံသစ္စဝေဇ္ဇန တထာမေဟာတု သဗ္ဗဒါ။”အနက်အဓိပ္ပယ္ဖြင့္ဆိုခ်က်..ဘိက္ခေဝ၊ ရဟန်းတို့။ဧတံ၊ ဤကုဏ္ဍဓါနသည်။မမ၊ ငါဘုရား၏။သာဝကာနံ၊ သာဝကျဖစ္ကုန်သော။ဘိက္ခုနံ၊ ရဟန်းတို့တြင်။ပဌမံ၊ ရွေးဦးစြာ။သလာကံ၊ စာရေးတံဆုကို။ဂဏွန္တာနံ၊ရေတြက်ျခင်းတို့တြင်။ယဒိဒံယံသော အယံကုဏ္ဍဓါနော၊ အကြင်အရွင္ကုဏ္ဍဓါန မေထရ်သည်။ အဂ္ဂံအေဂ္ဂါ၊ အျမတ္ဆုံျးဖစ်တ္မောူ၏။ဧတေန သစ္စဝေဇ္ဖန၊ ဤသို့ဟုတ္မွန်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရဲ့စိန်ဖူးတော်ပါ မြင်တာနဲ့ချက်ချင်း ရှဲလိုက်ပါ သင်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်…
ရွှေတိဂုံစေတီရဲ့စိန်ဖူးတော်ပါ မြင်တာနဲ့ချက်ချင်း ရှဲလိုက်ပါ..။ သင်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်။ကပ်ရောဂါကြီးဘေးမှလည်း ကင်းဝေးကြပါစေ..။ (၇)ရက်သားသမီးများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ..။ မင်္ဂလသုတ်တော်..၊ ၁။ ယံ မင်္ဂလံ ဒွါဒသဟိ၊ စိန္တယိံသု သဒေဝကာ၊ သောတ္ထာနံ နာဓိဂစ္ဆန္တိ၊ အဋ္ဌတ္တိံ သဉ္စ မင်္ဂလံ။ ၂။ ဒေသိတံ ဒေဝဒေဝေန၊ သဗ္ဗပါပဝိနာသနံ။ သဗ္ဗလောက ဟိတတ္ထာယ၊ မင်္ဂလံ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တန်ဖိုးထား အစားထိုး၍မရသာ ပိဋကတ် ၃ ပုံ (ပုံကိုနှိပ်၍ဖတ်ပါ)
သုတ္တန်ပေါင်း များစွာကို ဟောကြားရာတွင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ နိုင်နင်း စွာ ဟောပြော ပြသတဲ့နေရာမှာ သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် စံထားရလောက်ပေသည်။ သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မေတ္တာရှင် ဟရတိဟ ဆရာတော်ကြီးလည်း ဖြစ်ပေသည်။ ဝိနည်းကို ကျွမ်းကျင် လိမ္မာ နိုင်နင်းတဲ့ နေရာမှာ ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် စံထားရလောက်ပေသည်။ အဘိဓမ္မာကို ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ နိုင်နင်းစွာ
ကွမ်းယာနှင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်ပါသလား..(အချိန်နှစ်မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပေးပါအုံးနော်….)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ၅၄ သန်းကျော်ရှိပြီး လူဦးရေရဲ့ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဆေးလိပ်သောက် သုံးနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီထဲမှာမှ အမျိုးသား ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး ၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပါဝင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားခြင်းရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက
မနက်စောစော တစ်ကြောင်းတည်းသာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး
ပရိသတ်ကြီး တို့အတွက်ကောင်းသတင်းလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် မိမိမှာရှိနေတဲ့ လာဘ်ေ တွ မနိုးဘဲ မပွင့်ဘဲရှိနေရင် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးတာနဲ့ လာဘ်နိုး လာဘ်ပွင့်ပြီး ငွေတွေတလဟော ဝင်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်…တိုင်းနီးပါး လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတို့ ငွေဝင်ဂါထာ တို့ပဲ ရွတ်ဆိုနေကြပြီး လာဘ်ကိုနှိုးေ ပးဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါ တယ်အဲ့တော့ လာဘ်လာဘ ငွေကြေးတွေက
ထိုင်မှာ ပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ၀င်းနဲ့ဇော်အတွက် သတင်းကောင်း…
၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ် လ အတွက် နေ့နံ အလိုက် အောင် ဘာလေ ထီပေါက် ဂဏန်း
အိမ်ထောင်သည် ဦးကျော်မင်းထွန်းနှင့်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ချက်တင်တွေကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး…
မိုးခါးရေ သီချင်းကို အသံကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုပြလိုက်တဲ့ ညီငယ်လေး..(ရုပ်သံ)
သိမ်ဖြူလမ်းမပေါ်က တရားဥပဒေမယ့် လွန်းလှတဲ့ လုပ်ရပ်…(ရုပ်သံ)
ကွီးဖြိုးနာမည်သုံးပြီး ငွေလိမ်နေလို့ သတိထားကျစေလို…(ရုပ်သံ)